गगनको प्रश्न– पूर्वराष्ट्रपतिको उपचार खर्च के आधारमा व्यहोरियो ? – Khabar Silo
१२ असोज, काठमाडौं । कांग्रेस नेता गगन थापाले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको विदेशमा हुने उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको बताएका छन् ।मन्त्रिपरिषदको यसअघि बसेको बैठकले पूर्वराष्ट्रपति यादवले भारतमा गराएको उपचार खर्च बिलअनुसार व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।तर, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले सरकारको यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विदेशको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको नेता थापाको भनाइ छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको पेटमा क्यान्सर देखिएपछि तीन वर्षअघि अमेरिकामा उपचार गरिएको थियो । अमेरिकाबाट स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किएपछि डा. यादवले हरेक वर्ष भारतको चण्डीगढस्थित पीजीआईएमईआर अस्पतालमा नियमित जाँच गराउँदै आएका छन् ।
करिब दुईसाता अघि रगतमा केही खराबी देखिएको आशंकापछि डा. यादव चण्डीगढ गएका थिए । अहिले भने उनी स्वस्थ छन् । नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव कांग्रेसका पूर्वनेता हुन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि केही साताअघि उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । तर, उनले भने व्यक्तिगत खर्चमा स्वास्थ्य उपचार गराएको बताउने गरेका छन् ।
जसपाको अध्यक्षमा महन्थ र उपेन्द्र, वरिष्ठ नेतामा बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष भएका छन् । यस्तै, डा.बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो र अशोक राई वरिष्ठ नेताका रुपमा रहेका छन् । ठाकुर र यादवको अध्यक्ष रहने गरी आइतबार समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकता भई बनेको जनता […]